Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Kadhacay Duleedka Dhuxun oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Naafeeyay.
Dagaal Kadhacay Duleedka Dhuxun oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Naafeeyay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Nogob ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya dagaal ciidanka wayaanaha lagu wiiqay oo kadhacay Gobolka Nogob.
Warkan oo aan kahelay wariyaha ONA ee xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa sheegaya in ciidanka JWXO iyo kuwa wayaanuhu ay isku farasaareen duleedka Dagmada Dhuxun.
Sida warka aan kuhelay dagaalkan ayaa dhacay kadib markay Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia kawar heleen qorshe shacabka kadhan ah oo ay ciidanka wayaanuhu kawadeen magaalada Dhuxun iyo deegaanada ku xeeran.
Dagaalkan oo ahaa weerar ay qaadeen cutub katirsan CWXO oo si gaar ah utaba baran ayaa dhacay 7/1/17 wuxuuna kadhacay deegaanka Dulhowd oo Dagmada Dhuxun katirsan waxaana ciidanka wayaana dagaalkaas kasoo gaadhay khasaare lixaad leh oo aan wali lasoo faahfaahinin.
Sargaal u hadlay ciidanka qalabka sida ee xoraynta Ogadenia ayaa sheegay in ay dagaalka kufurteen hub iyo saanad ciidan oo kale.
Wixii kasoo kordha dagaalkaas iyo dagaalada kale kala soco ONA.